တက်ကစီ ဆရာနှင့်တမနက်စာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တက်ကစီ ဆရာနှင့်တမနက်စာ
Posted by Shwe Ei on Aug 29, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary | 12 comments
အိမ်ကထွက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ လမ်းပေါ်ရောက်တာ ၅မိနစ်မပြည့်သေးဘူး မီးပွိုင့်မိပါလေရော(လှည်းတန်းပွိုင့်လေ၊ သိတယ်မို့လား) ။ ရုံးချိန်က ၉နာရီ၊ အိမ်ကထွက်တော့ ၈နာရီ ခွဲ၊ မီးပွိုင့်မိတာ နာရီဝက်။ ကွက်တိဘဲ ရွှေအိတို့ကတော့။ တက်ကစီ ဆရာနဲ့တော့ ကောင်းကောင်းလေပစ်လို့ရတာပေါ့လေ။ ကုတ်ကိုင်းနဲ့ လှည်းတန်း ၁၅၀ဝ ခရီးကို ၂၀၀ဝ အတင်းတောင်းနေလို့ မနည်းချော့မော့ဆစ်လာရတယ်။
တက်စီ ။ ။ ကျွန်တော်တို့ တက်စီသမားတွေအားလုံး စက်တင်ဘာ ၁ရက်နေ့ကစပြီး မီတာချိုးမောင်းရတော့မှာဗျ။ မီတာမှာ ပြတဲ့အတိုင်းရတာက ပိုကိုက်တယ်။ တိလဲတိကျတယ်။ ကဘာမှာ ဘယ်နိုင်ငံမှ ပါးစပ်ဈေးနဲ့ တက်စီ မစီးဘူး။ မီတာအတိုင်းပေးတာ။ ဒီမှာ က လှည်းတန်းနဲ့ မြို့ထဲဆို ၂၀၀ဝ ဘဲ၊ အလွန်ဆုံးပေးတာ။ ခရီးသည်က နားမလည်ဘူး၊ စွတ်ဆစ်တော့တာဘဲ။ ပါးစပ်ဈေးနဲ့ စီးနေကြဖြစ်နေတာကိုး။
ကျွန်မ။ ။ ဟမ်၊ ဒါဆို အခုလိုပွိုင့်မိပြီး ရပ်ထားတဲ့ အချိန် မီတာတက်နေတာကျ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဦးလေးရဲ့။
တက်စီ။ ။ ဒါလဲ ထည့်တွက်ရမှာဘဲလေ။ ကျွန်တော်တို့က မီတာဖွင့်မမောင်းရင် အဖမ်းခံရမှာ။ ဒီမီတာက ၂သိန်းပေးဝယ်ထားရတာ။ ပထမတကြိမ် သောင်းဂဏန်း (ဒဏ်ငွေ)၊ ဒုတိယအကြိမ် သိန်းဂဏန်း နဲ့ CNG တလပိတ်၊ တတိယအကြိမ် သိန်းဂဏန်းနဲ့ လိုင်စင်တလပိတ်။ ဆိုတော့ ဒီမီတာကဘဲ ခရီးသည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားရပ်တည်ပေးမှာ။ ကျွန်တော်တို့က နောက်ဆိုပြေစာဘဲ ထုတ်ပေးပြီးပိုက်ဆံ ရှင်းခိုင်းတော့မှာ။ ပါးစပ်နဲ့ဈေးမပြောတော့ဘူး။
ကျွန်မ။ ။ အော်။ ဦးလေးရယ် ဒီလိုသာပွိုင့်မိနေရင် ခရီးသည်က သေပြီပေါ့။ အစိုးရကလည်းနော် တက်စီ သမားနဲ့ခရီးသွားပြည်သူကြား ဒွတ်ခရောက်အောင်လုပ်တယ်။ လမ်းတွေကြကောင်းအောင်မလုပ်ပေးဘူး။
တက်စီ။ ။ မဆိုင်ဘူး သမီးရဲ့။ ဒီနိုင်ငံက အစိုးရတင် အကျင့်စာရိတ်တပျက်ပြားတာမဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူလည်း အကျင့်ပျက်နေတာဘဲ။ ဒါကြောင့် အုပ်ချုပ်လို့ရတာပေါ့။ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားနဲ့ အုပ်ချုပ်ခံလူတန်းစား လိုက်ဖက်ညီတာကိုး။ မဟုတ်ဘူးလား။
ကျွန်မ။ ။ ဟုတ်မယ်ထင်တာဘဲ ဦးလေးရယ်။ မပြောတတ်တော့ပါဘူး။ ဒါနဲ့ တက်စီတွေ နံပါတ်နိမ့်ကား အားလုံးသိမ်းတော့မယ်ဆို။
တက်စီ။ ။ မဟုတ်ဘူး။ မော်ဒယ်မြင့်တာနဲ့ လဲပေးမှာ။ အုံနာက အလိုက်ပေးရမှာလေ။ ဒီကားတွေ အကုန် သံရည်ကျိုစက်ပို့မှာ။ ဒါပေမဲ့ ဒီစနစ်ကြီးကတော့ ဖြစ်နိ်ုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ လွယ်မှ မလွယ်တာ။
(ဘာလို့ မလွယ်တာလဲဆိုတာတော ့တက်စီဆရာမှဆက်မရှင်းပြတော့ပါ၊ကျွန်မလဲ မသိလို့ ဆက်မရှင်းပြတော့ပါ)
“”ဒီနိုင်ငံက အစိုးရတင် အကျင့်စာရိတ်တပျက်ပြားတာမဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူလည်း အကျင့်ပျက်နေတာဘဲ။ ဒါကြောင့် အုပ်ချုပ်လို့ရတာပေါ့။ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားနဲ့ အုပ်ချုပ်ခံလူတန်းစား လိုက်ဖက်ညီတာကိုး။ မဟုတ်ဘူးလား။””
တက္ကစိမီတာမှနေ၍ နိုင်ငံရေးကိုထောက်ပြဝေဖန်လို ့ကြိ ုက်လို ့နော်
မမမီးမီး လုပ်မှဘဲ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ပေါ်တော့တယ်။ အားပေးကြမ်းတယ်ဗျာ။
မော်မော်သီး ….။ မီးမီးသော် နင်ပြောတာနော်……။ နာတို့ မပေါရဲဘူး…။ ဟင်း ကြောက်တောင်ကြောက်လာပီ…….
အရင်က taxi တွေမှာ မီတာ သုံးကြသေးတယ်မဟုတ်လား…. ကျွန်တော်ကတော့ တခါမှ မစီးဘူးဘူးလေ.. မီးပွိုင့်မိလို့ မီတာ တက်ရင် ရန်ကုန်မှာလာပြီး taxi မောင်း စီးပွါးရှာရမယ် အဲဒါ ဂွင်ပဲ …
တညင်သားရေ ပွဲလန့်တုံးဖျာခင်းမလို့လား။ သံရည်ကျိုတဲ့အထဲတော့ မပါစေနဲ့နော်။
တက်စီ ကားတွေ အသစ်လဲ မီတာလဲသုံး ယာဉ်မောင်းတွေကလဲ ပညာပြတာမျိုး မလုပ်ရင်တော့
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အတွက် နစ်နာစရာ သိပ်မရှိဘူးထင်တာပဲ ၊ မီတာကို နောင်မဖြစ်မနေသုံးရမဲ့ အတူတူ အခုကတဲက အားလုံးက လိုလိုလားလား နဲ့ သုံးချင်တဲ့ အခြေအနေဆို ကောင်းတာပေါ့
အခုရန်ကုန်မှာ ကားအသစ်တွေ ဒီဇိုင်းဆန်း တွေအများကြီးတွေ့နေရတာပဲ။ ဘယ်ကဘယ်လိုဟာတွေမှန်းတော့ မသိဘူးပေါ့။ တက္ကစီကို မီတာနဲ့ စည်းကမ်းရှိရှိမောင်းစေချင်ရင် မူတစ်ခုခုတော့ သေချာချပေးမှရမယ်ထင်တယ်။ ပါရမီ တက္ကစီ လို လေအေးစက်နဲ့ကားသန့်သန့်တွေနဲ့ အသင်း အဖွဲ့ သို့ ကိုယ်ပိုင်အဖွဲ့အစည်းလေးတွေနဲ့ control လုပ်ရင်ပိုတာသွားမယ်ထင်တယ်။ အခု ကားပိုင်ရှင်တွေကိုလည်း အသင်းဝင်ခိုင်းပြီး လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ကားတွေကို သတ်မှတ်ချက် နဲ့မညီတော့ရင် အရစ်ကျစနစ်နဲ့ ကားလဲပေးတာဖြစ်ဖြစ် အားလုံး တန်းညှိပေးမှ ကောင်းမယ် ထင်တယ်။ သေချာတော့မပြောတတ်ပေမယ့် အမိန့်တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ ဘယ်လိုမှ standard တစ်ခုကိုမရောက်နိုင်ပါဘူး။ ကားကောင်း ကောင်းတွေ နဲ့ ဖွတ်ချက်ကားလေးတွေ မီတာနဲ့မောင်းတဲ့ဈေးကွက်မှာ ဘယ်လိုမှ မညီမျှနိုင်ဘူး။
မီတာနဲ့မောင်းရင် မီးပွိုင့်တင်ဘယ်ကမလဲ၊ ယဉ်ကြောညှပ်လည်း စီးသူကပဲခံရမှာ။ မီတာဖြတ်ရင် အစိုးရကို ဝင်ငွေလိမ်ဖို့ ခက်သွားမယ်လေ။ မြန်မာပြည်ထုံးစံအရကတော့ ထွက်ပေါက်ရှိမှာပါ။ ဖြစ်တတ်တာ (နယူးယောက်မှာ အရင်ကတော်ဆိုးတယ်၊ သက်ဆိုင်ရာက ရှောင်တခင်စစ်တာတွေလုပ်မှ ငြိမ်သွားတာ) မီတာကို ပိုမြန်အောင်လုပ်ထားတာ၊ လူရည်ခပ်လည်လည်ဆို သိပ်မလုပ်၊ နုံတုံတုံ အတတ ဒါမှမဟုတ် လုပ်လို့ရမဲ့သူဆို မီတာကို နှစ်ဆလောက် ပိုလည်ပြီး လိမ်တောင်းတာ…။
လှည်းတန်းက ဖြတ်ရမယ် ဆိုလို့ကတော့ကားမငှားနဲ့ ဗျို့ … ။ အဲ့ဒီမီးပွိုင့်က လုပ်ချင်သလိုလုပ်နေတာ အတော်လွန်တယ် …သူ့ဘာသာ သူ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းနဲ့ … ဆိုလျှင်တောင် ဒီလောက် ကားတွေ မကြပ်ဘူး… ကားတွေကလည်း ဖြူနီကြားတောင် အလွတ်မပေးဘူး … ။ တချို့ကလည်း လမ်းလည်ခေါင်ပိတ်ပြီး ခရီးသည်တင်ချလုပ်တယ် … လမ်းဘေး ဈေးသည်က လမ်းပေါ်တက်ဆိုင်ခင်းတယ် … အဲ့ဒါတွေ သိသိနဲ့ … မျက်စိမှိတ်နေတော့ … လမ်းက ချောင်မလား … နောက်ဆယ်နှစ် … ဆယ်နှစ် … ပဲ ဒါတောင် မသေချာဘူး ဟိဟိ
လမ်းမှာ ကျောက်ပေါက်မာတွေလည်း ရှိသေးတယ်လေ
မိုးတွင်းဗွက်ထနေရင် ကားတွေကသွားတာနဲ့ အမြဲဗွက်စင်တယ်
ဲပြီးတော့ လမ်းဘေးမှာကပ်ရပ်ထားတဲ့ကားတွေကလည်း စည်းကမ်းတကျမဟုတ်ပြန်ဘူး
အင်း၊ etone ပြောတာကွက်တိဘဲ။ ပို့စ်ထဲမှာ အဲဒါတွေထပ်ဖြည့်ရအုံးမှာ။
တော်ကြာ ကားသမားက ညစ်ပြီး ခရီးအတိုလေးကို မရှည်ရှည်အောင် ပတ်မောင်းနေရင် ဘယ့်နှယ့်လုပ်မလဲ။